Airbus neAir France zvinotarisa ndege dzakawanda dzinoshandisa magetsi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Airbus neAir France zvinotarisa ndege dzakawanda dzinoshandisa magetsi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • Investments • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Sustainability News • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
ALBATROSS ine chinangwa chekuratidzira, kuburikidza nhevedzano yemasuwo-kune-gedhi kuratidzira kwendege kuEurope, kugona kuita ndege zhinji dzinoshanda nesimba munguva pfupi, nekubatanidza akati wandei maR & D mahunyanzvi ehunyanzvi nekushanda.
Yakatangwa muna Kukadzi 2021, ALBATROSS idanho hombe-guru remapoka makuru evatambi veEuropean anotungamira neAirbus.
ALBATROSS inotevera nzira yakazara nekufukidza zvikamu zvese zvekubhururuka, zvichisanganisira zvakanangana nemapoka evanobata.
Kutanga kubva munaGunyana 2021, miedzo mhenyu ichabatanidza dzakatenderedza chiuru chekuratidzira nendege, ichiratidza mhinduro dzekukura dzine hunyanzvi pamwe nemafuta anogona uye CO1,000 yekuchengetedza.
Airbus, Air France uye DSNA, iyo French Air Navigation Service Provider (ANSP), vatanga kushanda vakanangana nekuvandudzwa kwendege "dzinopa simba rakawanda", zvichitevera kutanga kwavo kuratidzira kubva kuParis kuenda kuToulouse Blagnac pazuva remusangano wechiitiko cheAirbus Summit. Ndege yakabhururuka yakakwenenzverwa trajectory, ichimaka yekutanga yezvikamu zvakateedzana zvemiyedzo zvakarongwa panguva ya2021 na2022 mukati mehurongwa hweSingle European Sky ATM Research Joint Undertaking (SESAR JU) "ALBATROSS" chirongwa.
Yakatangwa muna Kukadzi 2021, ALBATROSS idanho hombe-guru remapoka makuru eEuropean avateereri anotungamirwa Airbus. Inovavarira kuratidza, kuburikidza nhevedzano yedzimba-kuenda-gedhi kuratidzira kwendege kuEurope, kugona kuita ndege zhinji dzinoshanda nesimba munguva pfupi, nekubatanidza akati wandei maR & D mahunyanzvi nehunyanzvi hwekuita.
"ALBATROSS" inotevera nzira yakazara nekufukidza zvikamu zvese zvekubhururuka, zvichisanganisira zvakanangana nemapoka evanobata (senge ndege, ANSPs, mamaneja enetiweki, nhandare nemaindasitiri) uye kugadzirisa zvese zviri zviviri mashandiro uye tekinoroji yendege neAir Traffic Management (ATM). Mhinduro zhinji dzinozoiswa mukuratidzira panguva yekuratidzira kwendege, kubva pamatanho matsva enzira yekuenderera mberi nekukwira nekudzika, simba rakanyanya rekugadzirisa kwezvinodikanwa zvemuchadenga, tekisi inochengetedzwa uye kushandiswa kwekusimudzira mafuta (SAF).
Kutenda nekufambiswa kwemadhigiri-enzira yedhisheni, ATM inozokwanisa kukwidziridza uye zvirinani kufungidzira nzira yendege, nokudaro ichiigonesa iyo pakarepo uye zvine mutsindo kudzikisira tsoka yendege.
Kutanga kubva munaGunyana 2021, aya miedzo mhenyu ichabatanidza dzakatenderedza chiuru chekuratidzira nendege, ichiratidza mhinduro dzakakura dzekugona pamwe nemafuta anogona uye CO1,000 yekumesa kuchengetedza. Chekutanga mhedzisiro inotarisirwa kuwanikwa muna 2.
Vabatsiri veALBATROSS ndivo Airbus, Air France, Austro Kudzora, DLR, DSNA, Eurocontrol, LFV, Lufthansa, Novair, Schiphol, Smart Airport Systems, SWEDAVIA, SWISS, Thales AVS France neWIZZ AIR UK.
Iyo mari yechirongwa ichi inopihwa neEU pasi pechibvumirano cheGrant No 101017678.